Praiminisitra Ntsay Christian : Tanjona ny hahatongavana any amin’ny fifidianana -
AccueilSongandinaPraiminisitra Ntsay Christian : Tanjona ny hahatongavana any amin’ny fifidianana
Praiminisitra Ntsay Christian : Tanjona ny hahatongavana any amin’ny fifidianana
07/06/2018 admintriatra Songandina 0
Mazava izao ny tanjon’ny asa hifotoran’ny praiminisitra vaovao, izay nanatanteraka ny famindram-pahefana omaly tamin’ny praiminisitra teo aloha mahalafaly Olivier tetsy amin’ ny lapam-panjakana Mahazoarivo. Lanonana izay natrehin’ireo olona manan-kaja voafidy sivily sy miaramila, ary nahitana ihany koa ireo masoivoho vahiny sy ireo depiote sy senatera ankoatra ny avy amin’ ny depioten’ i Ravalomanana. Nandritra ny kabarin’ ny praiminisitra Ntsay Christian no nilazany fa laharam-pahamehana ny fandehanana mankany amin’ny fifidianana malalaka sy mangarahara ary eken’ny rehetra. Na dia natolotry ny avy amin’ny Mapar aza ity praiministra ity dia mitovy lalana amin’ ny fitondram-panjakana ny asa izay ho sahanina, dia ny fankanesana any amin’ny fifidianana izany. Ankoatra izay dia eo ihany koa ny fametrahana ny filaminana eto amin’ny tany sy ny fanjakana, ary tsy hohadinona ny nilaza ny fanatanterahana ny programam-pampandrosoana PND. Raha hiverenana ny kabarain’ny praiminisitra mahakasika ny fifidianana izay hotanterahina dia nambarany fa fifidianana malalaka, madio, mangaraharaha ary eken’ ny rehetra no tanjona. Izany rehetra izany hoy ny praiministra dia miainga amin’ ny fanomanana mandra-pahavitan’ ny fifidianana, ary ahafahana mamita izany dia ny fametrahana ny fitoniana sy ny fiaraha- mientan’ ny governemanta rehetra.
Taorian’ ny lahateny izay notanterahin’ny praiministra Ntsay Christian moa dia maro ny fanontaniana izay napetraky ny mpanao gazety, mikasika ny mety ho fomba fiasa amin’ny fanomanana izay fifidianana ho avy. Nambarany tamin’ izany fa miainga amin’ ny fanapahana navoakan’ ny HCC avokoa ny asa tanterahina rehetra, ka noho izany dia hisy ny fiaraha- miasa akaiky amin’ ny CENI. Anisan’ny fanontanina izay napetraky ny mpanao gazety nanatrika ny lanonana famindram-pahefana teny Mahazoarivo ihany koa ny mikasika ny firafitry ny governemanta ho avy eo , io izay nambaran’ny praiminisitra fa governemantan’ ny marimaritra iraisana no hitsangana eo, satria maro ny zavatra efa nolalovan’i Madagasikara. Noho izany dia hisy ny marimaritra iraisana sy ny fisokafana ho tombontsoan’ i Madagasikara. Teny ampamaranana anefa dia nanamarika ny praiminisitra fa mikasika ny fanendrena izay ho mpikambana amin’ny governemanta dia anjaran’ny Filoham-pirenena madiodio no manao ny fanendrena.